Toeram-pilalaovana vola tena izy - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(565 vato, average: 5.00 avy tany 5)
Loading ... Ny volam-bola tena izy dia milalao ao amin'ny ankamaroan'ny casinos amin'ny tany any an-tany, na dia hafa noho ny trano iray amin'ny manaraka aza ny sisin'ny trano eo amin'ny lalao. Any amin'ny faritra filalaovana mivantana, matetika ireo fanapahana ireo dia manapaka ny kaontinanta, na dia misy tanàna na faritra sasany aza mety hanome toerana filokana tsara kokoa. Ny tokony ho fantatrao dia misy tsy fitovian-kevitra tsy dia misy ao anatin'ny lozam-pifandraisana azonao, ka mianara izay atolotry ny andiany lehibe tsirairay amin'ny roulette. Mandritra ny fotoan'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny safidy lehibe aminao aho. Rehefa vita, dia tokony ho fantatrao izay rehetra ilainao mba hanapa-kevitra tsara.
Lisitry ny Top 10 Roulette Sites
Amerikanina & Alemana Roulette
Ny roulette eropeana dia ny dikan-dalao nalaza nataon'ny casinos tao Monte Carlo tao amin'ny Principality Monaco ao amin'ny Riviera frantsay. Na dia eo aza ny fomba fijerin'ny besinimaro, ny roulette eropeana tokana dia tsy ny kinova voalohany amin'ny lalao. Nanomboka nanolotra lalao kilalao tokana mba hamandrihana ny mpanjifa, ny fanodinana fomba nentim-paharazana nandritra ny taonjato roa tamin'ny taonjato faha-X. Ny fananana slot iray na am-paosy eo amin'ny kodiarana dia tombony lehibe ho an'ny mpiloka, satria ny ankamaroan'ny andalana amin'ny kodiarana dia very rehefa feno ny baolina tamin'ny iray amin'ireo paosy 19. Noho izany antony izany, ny sisin'ny trano 0% dia roulette eoropeana lavitra kokoa noho ny dikan-tsarimihetsika amerikanina amin'ny lalao.
Ny roulette amerikana dia mitovitovy amin'ny endrika tany am-boalohany amin'ny lalao rehefa nilalao tamin'ny taonjato 17 sy 18 tamin'ny taonjato 1. Ankoatra ny paosy ho an'ny isa 36 amin'ny alàlan'ny 0, ny kodiarana koa dia misy ny 00 sy 5.26 liang. Avereno indray, ny fampidirana an'io paosy very fanampiny io dia manamaivana ny fandresenao. Ny sisin'ny trano dia XNUMX% amin'ny roulette amerikanina na Las Vegas, izay antsoina koa hoe roulette roa miaraka. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia te hisoroka ity lalao ity ianao, raha azo atao. Amin'ny toe-javatra tsy fahita firy dia mahita fitsipika manafoana an'io fiheverana io ianao. Rehefa tsy azonao antoka dia milalao amin'ny kodiarana eoropeana.
Rehefa milalao roulette vola tena izy ao amin'ny casino biriky-ary-mortar, dia ho hitanao fa ny sezika amerikana dia nilalao eo amin'ny ankamaroan'ny toerana any Amerika Avaratra, fa ny lalao Euro dia milalao amin'ny toerana hafa eto amin'izao tontolo izao. Ny casinos Las Vegas Strip sasany dia manolotra roulette single-zero ao amin'ny toerana voafantina amin'ny gorodona filalaovany mandritra ny fotoana mandritra ny herinandro, matetika toy ny lalao dolara ambony miaraka amin'ny ambany indrindra amin'ny $ 25 na mihoatra. Ny ampahany vitsivitsy amin'ireto Vegas Strip ity dia manolotra roulette Eropeana 15 eropeana, na dia mety tsy maintsy mitsidika amin'ny fotoana iray manokana isan-kerinandro ianao mba hilalao. Ny olona dia nandefa an-tserasera an-tserasera fa vitsy ny casino Tunica, Mississippi dia nanolotra kilalao tokana tsy misy aloha tany, fa toa tsy izany no izy amin'izao fotoana izao.
Any Atlantic City, ny lalàna any New Jersey dia manery ny filokana hanome lalàna manokana momba ny roulette amerikana. Ireo lalàna ireo dia antsoina hoe "la partage", izay frantsay amin'ny "ny ampahany" na (amin'ny fiteny amerikana) "amin'ny ampahany". Ny ataon'ity fitsipika ity dia ny milaza fa very ny antsasaky ny filokanao fotsiny ianao rehefa mahazo filokana ara-bola ara-bola ary mipetaka amin'ny baoritra 0 na 00 ny baolina. Ka raha toa ianao ka mahazo vola 20 $ amin'ny hi / lo, mena / mainty, na koa propose / hafahafa ary milatsaka amin'ny zero ny baolina dia ho very $ 10 fotsiny ianao. Izany dia manasaraka ny sisin'ny trano amin'ny filokana ara-bola hatramin'ny 2.63%, izay mahatonga ity kinova amerikana amerikana ity ho filokana somary tsara kokoa noho ny roulette eropeana. Mampalahelo fa maro amin'ireo trano filokana Boardwalk no manolotra ny "Rapid Roulette", izay manome fitsipika tsara mitovy (ka mahafapo ny lalàn'i New Jersey), saingy nilalao haingana kokoa noho ny lalao mahazatra. Araka ny efa noeritreretinao azy, ity dia mampiharihary anao bebe kokoa isan-trano isan'ora, ka hampiakarana ny tombam-bidin'ny casino isan'ora.
Roulette dia iray amin'ireo lalao latabatra izay atolotra fotsiny amin'ny casinos any amin'ny fanjakana sasany. Ohatra, ireo fanjakana toa an'i Colorado, Connecticut, Georgia, Idaho, ary Illinois dia manana casinos izay manolotra ny lalao. (Raha jerena ny Zeorzia, mijery karajia ho an'ny karaoty ianao fa tsy ny biriky biriky sy ny trano fikojakoana.) Manolotra kilalao iray amin'ny roulette i Florida, saingy noho ny lalàna momba ny fanjakana, dia tsy voatery hiantso an'izany izy ireo.
Rehefa milalao roulette an-tserasera ho an'ny tena vola an-tserasera ianao matetika dia mahita rohy amerikana sy eoropeana rohy. Ny safidy izay lalao hilalao dia miharihary (kilalao ny lalao Euro), raha tsy hoe tsapanao fa ny casino dia manana fitsipika manokana izay mankasitraka ny lalao amerikana. Ny ankamaroan'ny fotoana, ny mpandraharaha dia manome safidy fotsiny ny mpilalao, amin'ny fanantenana fa ny mpitsoka Amerikanina sy Kanada no manao ny dikan-dahatsoratra nentin-drazana amerikana nentim-paharazana, amin'ny fiheverana fa tsara kokoa izany. Tsy toa ny casino live, ny mpandraharaha dia tsy mila milalao mpiasa fanampiny hiatrika ireo lalao ireo, noho izany dia kely na tsy mandoa vola (miankina amin'ny mpamatsy rindrambaiko) hanome ilay safidy lalao fanampiny.
Averina indray, raha manana ny safidin'izy roa ianao ary tsy fantatrao hoe inona ny fitsipika, alao ny kinova Eoropeana amin'ny lalao natolotra. Ny mety, izany no safidy tsara kokoa. Tokony holazaiko fa ny roulette eropeana amin'ny vola tena izy izay manolotra fitsipika "la partage" (na ny "en jail" / fitsipika momba ny fanagadrana) no dikan-teny tsara indrindra azonao raisina. Izy io dia mampihena ny sisin'ny trano hatramin'ny 1.35%, izay azo ampitahaina amin'ny lalao toy ny craps sy baccarat. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ity kinova manokana an'ny lalao ity dia misy ny mety ho an'ny lalao rehetra ao amin'ny casino an-tserasera izay tsy misy singa paikady. Ny Baccarat, ny craps ary ny roleta dia mazàna tsy manana paikady kely tadidy (ankoatry ny fahafantarana izay filokana tokony hatao), noho izany dia manome ny faran'izay mety indrindra izy ireo nefa tsy mila mianatra ary mijanona ho maranitra mandritra ny filokana.
Ao ambadik'ireo paikady ireo dia natao amin'ny isa tokana na vondrona kely misy ifandraisany. Nantsoina tao anaty paosin-dry zareo izy ireo satria napetrakao ao anatin'ny layout ny sambo. Ny karatra mahitsy dia misy laharana tokana, ary hametrahanao mivantana ny tarehinao. Ny pika sivana dia natao ho an'ny nomera 2, ary napetraka eo amin'ny tsipika manasaraka ireo tarehimarika roa ireo. Ny sidina an-dalambe dia natao amin'ny laharana 3 amin'ny andalana, toy ny 1-2-3 na ny 4-5-6. Ampiasao ity karoka ity eo amin'ny andalana ivelany amin'ny tarehimarika izay manomboka ity fizarana ity ary, satria ny laharana dia ao anaty lalan-kely, antsoin'izy ireo hoe arabe.
Manohy ny lisitry ny betsimitsina ao anatiny, ny zoro na quad bet dia midika ny nomerao 4. Ireo tarehimarika efatra ireo dia tsy maintsy mamakivaky, ka mamela anao hametraka ireo sambo izay miray tsikombakomba amin'ireo zoro efatra. Ny sobika dia karazana 5-laharana amin'ny American roulette, ary misy ny 0, 00, 1, 2, ary 3. Aza manao ny poketrany hipetraka, satria misy ny ratsy indrindra amin'ny lalao; Manana rindrina trano 7.89% izy io. Farany, ny lalam-piaramanidina roa na ny laharana baolina dia midika avy hatrany ireo dian-dàlana an-dalambe anankiroa. Apetrakao eo amin'ny tsipika anelanelan'ny arabe roa ny sambo, indray mandeha mankany ivelan'ny laharana manaraka.
Roulette Wagers - Outside Bets
Raha toa ka misy isa 6 na latsaky ny filokana ao anaty, ny filokana ivelany dia misy filokana amin'ny isa 12 na mihoatra indray mandeha. Azonao atao ny milaza fa io filokana io dia amin'ny karazana isa. Satria isa maro kokoa no alefa, ny vintana handresena ireo filokana ireo dia lehibe kokoa noho ny ao anaty filokana, na dia kely aza ny karama. Ataovy ao an-tsaina fa (ankoatry ny filokana boaty), ny roulette wagers rehetra dia manana odds mitovy, raha tsy hoe mampiasa fitsipika manokana. Ny filokana amin'ny «roa ambin'ny folo» dia misy ny filokana amin'ny 1 ka hatramin'ny 12, 13 ka hatramin'ny 24, na 25 ka hatramin'ny 36. Ny fanaovana filokana ara-bola dia misy ny filokana amin'ny tolo-kevitra avo / ambany, ny tolo-kevitra mena / mainty, na ilay propose tsy mitovy / hafahafa . Antsoinin'izy ireo ireo filokana ara-bola ireo satria mandoa amin'ny 1: 1 izy ireo, saingy tadidio fa tsy manana 50% vintana ianao hamely azy ireo, noho ny fisian'ny slots 0 amin'ny kodiarana.
Tsanganana filokana no 12-isa filokana amin'ny iray amin'ireo vondrona telo ny isa. Dia ahitana ny isa fisehon'ny 3 andry ny 36 maro, ka samy manana 12 tsanganana maro ao aminy. , Ohatra, tafiditra amin'ny tsanganana iray ny isa 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34. Toerana ireo ianao amin'ny farany ambany wagers ny andry tsirairay. Farany, dia ho vitanao ny bibilava wager amin'ny serpentine fomba isa izay crisscross ny fisehon'ny. Ny isa tafiditra ny 1-5-9-12-14-16-19-23-27-30-32-34. Na ianao hihaino ny olona miantso izany ny sucker Bet, satria fotsiny ianao Betting vondrona iray eo amin'ny tsirairay ireo isa araka ny tianao raha tsy izany, tsy mendrika ny hahazo ny famaritana, satria ny mifanohitra foana toy izany koa amin'ny wager ity.
Online Roulette for Real-bola
Na oviana na Casino aterineto hahita amin'ny aterineto, tsirairay ireo wagers dia atolotra ny rindrambaiko fonosana. Ny safidy eo ny ao anatiny na ny ivelany Bet tena misy ifandraisany bebe kokoa amin'ny hoe impiry no te-handresy sy tena ianao rehefa mandray karama manao. Raha leo miandry am-polony spins mba hahazo ny loka, dia tokony hilalao any ivelany wagers. Raha mahita azy mahaliana kokoa ny manana payouts lehibe, dia tokony hilalao ny anatiny wagers. Ankoatra ilay efajoro Bet, wagers rehetra, manana ny amin'izany trano izany sisiny, noho izany aza manantena ny hahita ny paik'ady tombony amin'ny fifidianana izay Bet ny hanandrana.
Raha te-handinika ny fomba fijery mifanohitra amin'ny iray hafa anefa, dia afaka milaza ianao fa ny trano manana lelan amin'ny anareo ny kofehy ireny, toy izany koa ny vitsy spins misy, vao mainka vintana fa tsy mety hisy vokany eo ny vokatra. Amin'izany endri-javatra, dia manao dikany kokoa ny toerana filokana ao anatiny, satria ianao afaka handresy ny 35: 1 payout ny 20th kofehy ireny (ohatra) ary mandeha miala amin'ny tsara payout. Raha toa ka kosohy ny ho 1: 1 sy 2: 1 payouts, ianao sisin'ny miatrika ny trano im-betsaka. Mazava ho azy, nametraka ny anatiny wagers midika ianao manana be dia be ny fotoam-pivoriana izay very ny bunch ny filokana ka tsy manan-haneho noho ny lalao, satria tsy avy amin'ny fanontaniana mba manana 50 ho 100 spins haka toerana tsy iray manokana isa mikapoka mandrakizay. Raha izany no isan'ny Betting ianao, very ianao iray taonina ny vola.
Ny fiheverana etsy ambony dia tsy mampihatra rehefa milalao miaraka amin'ireo fepetra voalaza etsy ambony na amin'ny fampidirana am-ponja, satria izy ireo dia midika ny trano amin'ny banky amin'ny vola, fa ny vola monja ihany. Raha milalao miaraka amin'ireo fitsipika ireo ianao na any Eoropa na amerikana, dia tsara kokoa ny manosika ny vola eny amina / mainty, avo / ambany, na eny / odd.
0.1 Lisitry ny Top 10 Roulette Sites
2.1 Amerikanina & Alemana Roulette
2.5 Roulette Wagers - Outside Bets
2.6 Online Roulette for Real-bola